eNasha.com - राजधानीमा फेरि बम आतङ्क
राजधानीमा फेरि बम आतङ्क
दुइ जनाको ज्यान र २६ जना घाइते हुने गरी आइतबार भएको तीन ठाउँमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विष्फोटपछि सरकार, राजनीतिक पार्टी र जनताको एक साथ सातो गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण सोमबार आकस्मिक मन्त्री परिषद्को बैठक डाकिनु, राजनीतिक पार्टीले घटनाको तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै क्षोभ व्यक्त गर्नु त्यसको प्रमाण हुन् ।
नेपालमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बम पड्काउनेहरुले राम्रैसँग उपयोग गरेका छन् । किनभने कुनै पनि निश्चित उद्देश्यका लागि गरिने क्रान्तिमा र्सवप्रथम आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरु बुँदागत रुपमा देशको वैधानिक सरकारलाई जानकारी गराइन्छ । सरकारलाई विरोधपत्र दिइसकेपछि केही समय दिइन्छ, कार्यान्वयनका लागि । त्यसपछि पनि सरकारले टेर पुच्छर नलगाएको पाइए सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिन्छ । २०५२ साल फागुन १२ गते माओवादीहरुले सशस्त्र क्रान्ति थाल्नुअघि यिनै नियमितताबाट गुज्रिएका थिए । तराईमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका तराई मुक्ति मोर्चा या मधेशी मुक्ति मोर्चाजस्ता सशस्त्र आन्दोलनकारीहरुले पनि औपचारिक रुपमा सरकारसँग युद्धको घोषणा गरेकै हुन् ।
तर नेपाल डिफेन्स आर्मी, नेपाल आर्मी, तराई आर्मीजस्ता नाम नसुनिएका र त्यसको मुख्य व्यक्ति को हो भनेर नखुलिएका स-साना समूहले सरकारसँग औपचारिक माग गर्ने, त्यो मागको बेवास्ता भए मात्र आन्दोलनहरु चर्काउने सामान्य राजनीतिक नियम पनि पालना गरेका छैनन् ।
आइतबार भएको विष्फोटमा जिम्मा लिनेहरुको राम्रै होड देखिएको छ । खबरअनुसार नेपाल डिफेन्स आर्मी, तराई आर्मी, तराई उत्थान संगत, गोरखा मुक्ति मोर्चाले विष्फोटको जिम्मेवारी लिएका छन् । तीन विष्फोट र चार दाबी ! यस्तो चाहिँ नेपालमै मात्र हुन्छ ।
तर यो विष्फोटमा सर्वसाधारणको ज्यान लिनुको कारण बारे उनीहरुले कुनै धारणा र्सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
माओवादीको योङ कम्युनिष्ट लिगको सभा खुल्ला मञ्चमा सकिँदै गर्दा यो विष्फोट हुनुले माओवादीसँग खास दुश्मनी पनि साँध्न खोजिएको हो कि भन्ने शंका पनि जन्माएको छ । अनलाइन खबरले त यसमा सेनाको समेत संलग्नता हुनसक्ने आशंका गरिसकेको छ ।
तर यो विष्फोट कसका लागि र किन भन्ने पुष्टि हुन जरुरी छ । यदि यो माओवादीविरुद्ध हो भने पनि खुला रुपमा युद्धको घोषणा गर्नुपर्‍यो ! जस्तो कि तराईका कतिपय हतियारधारीहरुले खुलेआम नै माओवादीविरुद्ध खनिएका छन् । यदि यो अहिलेको सरकारका विरुद्धमा हो भने सरकार संलग्न स्थानहरुमा विष्फोट गराउनु पर्‍यो र तिनको कानेगुजी सफा पार्नु पर्‍यो । तर निहत्था जनतामाथि बम आक्रमण चाहिँ आततायी नै हो । यसमा कोही पनि सहमत हुन सक्तैन ।
यो विष्फोटमा परेर मर्ने विद्यार्थी अनिता केसी र महिला कमलादेवी शाही उनीहरुको आन्दोलनका विरोधी भएकाले हत्या गरिएको हो कि हतियार उन्मादका कारण मारिएका हुन् ? यसको जवाफ तिनले दिनुपर्छ ।
crisis माओवादी संविधानसभा awards पेट्रोल हल्ला मोबाईल अनुभव समलिङगी सेलेब्रिटी hi-life streets events celebrity festival